PRADEEP BASHYAL: तान्दैछ गार्डेन सीटीले
तान्दैछ गार्डेन सीटीले
काठमाडौँमा ए-लेभल सक्दानसक्दै अमेरिका उड्ने भनेर धमाधम स्याट परीक्षाको तयारी गररिहेका नीतिश कार्कीले आफ्नो योजना त्यतिबेला बदले, जतिबेला उनलाई कसैले भारतको 'गार्डेन सीटी' अर्थात् बैङ्लोरका बारेमा सुनाइदियो। बूढानीलकण्ठ स्कुल अध्ययन गरेका १९ वर्षे कार्की यतिबेला बैङ्लोरमै छन्। "घर छोडेर धेरै टाढा पनि जान नसक्ने तर पश्चिमा शैलीको पढाइ खोज्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि बैङ्लोर निकै उपयुक्त छ," उनी भन्छन्, "त्यसबाहेक यहाँको पढाइ खर्च सस्तो र भर्ना पाउन पनि सजिलो छ।"
कार्कीले भनेजस्तै विशेषताका कारण पछिल्ला दिनमा बैङ्लोरमा नेपाली विद्यार्थी आगमन बाक्लिएको छ। कतिपय विद्यार्थी थोरै समयमा सकिने कोर्सका कारण पनि यतातिर आकषिर्त भएका छन्। जस्तो- कार्की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र बिजनेस म्यानेजमेन्ट -बीबीएम) एकैपटक पढ्न चाहन्थे। उनको यो चाहना यहाँ सम्भव भएको छ। "दुवै विषय फरकफरक समयमा पढ्न नौ वर्ष लाग्थ्यो मलाई। तर, यहाँको विशेषता भन्नु नै दुवै कोर्स पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सकिनु हो," उनी भन्छन्, "मजस्ता थुप्रै विद्यार्थी यहाँ छन्।"
कार्कीसँगै ए-लेभल सकेका विवेक केसी, १९, र रूपेशमान सिंह, १८, पनि सँगै बस्छन्। सबैले पढ्ने कलेज र कोर्सहरू एउटै हुन्। मासिक १२ हजार भारतीय रुपियाँमा उनीहरूले फ्ल्याट भाडामा लिएका छन्। उनीहरू दिउँसो आचार्य इन्स्िटच्युट अफ म्यानेजमेन्ट साइन्सेजमा बीबीएम पढ्छन् भने साँझ ४ देखि ८ बजेसम्म सेन्ट जोसेफ कलेज अफ कमर्समा सीएका लागि प्रवेशिका तयारी कक्षामा पुग्छन्। राती घर र्फकंदा ९ बजिसकेको हुन्छ, कलेजले दिएका गृहकार्यहरू र भोलिपल्टका पाठको तयारी गर्दा मध्यरात त्यसै कट्छ । बैङ्लोरमा नेपाली विद्यार्थीको दैनिकी अति यान्त्रिक रहेको बताउँदै केसी भन्छन्, "बिहानको खाना पकाएर खान पनि भ्याइँदैन।" बिहान ७ बजे उठ्दा खाजा र नुहाइधुवाइमै एक घन्टा बित्छ। 'पिकआवर' हुनाले बिहान कलेजसम्म पुग्न अटोका लागि कम्तीमा एक घन्टा छुट्याउँछन् उनीहरू। दिउँसोको खाना कलेज क्यान्टिनमै खान्छन्। "पढ्न समय नै नपुग्ने हुँदा साँझको खाना पनि प्राय: बाहिरै खान्छौँ," केसी थप्छन्, "यहाँ म्यानेजमेन्ट र सीए दुवै पढ्नेहरूलाई त यस्तो नगरे सम्भव नै हुँदैन।" आचार्य कलेजमा मात्र उनीहरूजस्ता २० नेपाली विद्यार्थी छन्। विशेष गरी नेपाली विद्यार्थी प्ाढ्न रुचाउने अन्य पाँच म्यानेजमेन्ट कलेज र सीए इन्स्िटच्युटहरूमा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै झन्डै डेढ सयको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् ।
व्यस्तताले गर्दा यहाँका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेज-घरको रुटबाहेक अन्यत्र राम्ररी घुम्ने मौका पनि जुर्दैन। "जर्मन सेर्फड कुकुरसँग खेल्छौँ, गितार बजाउँदै कोठाभित्रै गीत गाउँछौँ, फेसबुक त छँदै छ," रूपेश फुर्सदमा गर्ने कामहरू बताउँछन्, "थोरै समयमा बाहिर निस्कन सकिँदैन। गाह्रो त गाह्रो छ।"
दुई-तीन वर्ष मात्र भयो, यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरू आउने क्रम बढेको। पढाइका लागि भारतका अन्य सहरहरू नयाँदिल्ली, पुणे, गोवा, इलावाद आदि पनि नेपाली विद्यार्थीका लागि राम्रा गन्तव्यका रूपमा परििचत छन्। तर, मौसम र राम्रो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण पछिल्ला दिनमा यतातिर आकर्षण बढेको बताउँछन्, नेसनल इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी, कर्नाटकमा बीई -कम्प्युटर) दोस्रो वर्षका विद्यार्थी युवराज पोखरेल, २१। यहाँको तापक्रम औसत बढीमा ३३ र कममा १५ डिग्री सेल्सिएस हुने हुँदा नेपालबाट आउनेका लागि भारतका अन्य ठाउँभन्दा यो ठाउँ उपयुक्त छ। त्यसका साथै यहाँका स्थानीयको सहयोग, व्यवहार र पश्चिमा शैलीको विकासले युरोप-अमेरिका नै पुगेको झल्को दिने पनि उनको अनुभव छ। सडक छेउमा रोपिएका ठूलासाना रूख र ठाउँठाउँमा पानीका फोहरासहितका बगैँचाले सहरलाई सुन्दर र शीतल पनि बनाएका छन्। पोखरेलका भनाइमा, भारत भन्दा झट्ट मनमा आउने चोरी, डकैती, ठगीजस्ता कुराहरूबाट टाढै छ बैङ्लोर। अटोड्राइभरले कहिलेकाहीँ झोला वा पर्स छुट्दासमेत फोन गरेर बोलाउँछन्। पोखरेल भन्छन्, "व्यावसायिक नैतिकताप्रति यहाँका मान्छेहरू प्रतिबद्ध छन्।" प्रत्येक ट्याक्सीमा पर्यटक नठगियून् भनेर 'ग्लोबल पोजिसनिङ् सिस्टम' जडान अनिवार्य गराइएको छ। यद्यपि, भारत भन्दैमा बैङ्लोरबासी धेरैलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन। यहाँ अंग्रेजी वा कन्नडमध्ये कुनै एक भाषा जान्ने भए बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई सहज हुन्छ।
नेसनल इन्स्िटच्युट अफ साइन्स -निस्ट), काठमाडौँबाट प्लस टू सकेपछि भारतीय दूताबासको छात्रवृत्तिमा आउने अवसर पाएका पोखरेलले सहरको आकर्षण र 'आईटी सीटी' भनेर प्रसिद्धि कमाएकै कारण अध्ययनका लागि बैङ्लोर छानेका रहेछन्। "यहाँ सूचनाप्रविधि र इञ्जिनियरङि्का सिर्जनशील व्यक्तिहरूको जमघट बढ्ता हुने हुँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा यहाँको अध्ययनलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ," उनी भन्छन्। पोखरेल पढ्ने कलेजमा मात्रै अहिले १० जना नेपाली इन्जिनियरङि्का विद्यार्थी छन्। यद्यपि, निजी आईटी कलेजहरूमा अन्य कजेजमा भन्दा दोब्बर विद्यार्थीको चाप छ । चारवर्षे यो कोर्स सक्न झन्डै १० लाख भारतीय रुपियाँ खर्च लाग्छ।
निजी कलेजहरूमा वाषिर्क ३५ देखि ४५ हजार रुपियाँको हाराहारीमा होस्टेल खर्च लाग्ने भए तापनि नेपाली खानाको जस्तो स्वाद नहुने हुँदा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू डेरामा बस्छन्। फ्ल्याट वा कोठा भेट्टाउनका लागि दलालहरू ल्ागाउनु पर्छ। एक महिनाबराबरको भाडा त दलालले नै लिन्छ। त्यसबाहेक एक वर्षको भाडा पहिल्यै जम्मा गर्नुपर्छ। कलेजकै नजिक कोठा पाइने सम्भावना निकै कम हुन्छ, त्यसैले दैनिक यात्रा गर्न विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर महानगरपालिकाले कलेजको 'सेमेस्टर फि' बुझाएको रसिद हेरेर एउटा 'ट्राभल पास' दिन्छ। यसका लागि मासिक झन्डै एक हजार भारतीय रुपियाँ तिर्नुपर्छ। पास देखाएपछि बैङ्लोरभर ियात्राका लागि स्थानीय बसमा पैसा तिर्नुपर्दैन।
बैङ्लोर नेपाली विद्यार्थीमाझ व्यवस्थापन र आईटी विषयका लागि मात्र चर्चित छैन। होटल म्यानेजमेन्ट, नर्सिङ् र फार्मेसीका लागि समेत नेपाललगायत दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्। नवलपरासीकी कल्पना गौँड, १९, तिनैमध्येकी एक हुन्। गत वर्ष बैङ्लोर छिरेकी उनले वैदी इन्स्िटच्युट अफ नर्सिङ् साइन्स एन्ड रसिर्च सेन्टरमा बीएस्सी-नर्सिङ् गररिहेकी छन्। उनको कक्षामा मात्र २२ जना नेपाली छात्रा छन्। नेपालमा बीएस्सी नर्सिङ्मा नाम निकाल्न निकै प्रतिस्पर्धा छ तर यहाँ सहजै र सस्तोमा त्यस्तो अवसर जुर्छ, पूरा कोर्स सकेको साढे पाँच लाख रुपियाँ जति लाग्छ। उनका अनुसार, नेपालको भन्दा पनि बैङ्लोरबाट लिइएको नर्सिङ् विषयको प्रमाणपत्रलाई बढी मान्यता दिइन्छ।
बैङ्लोरको पढाइ सस्तो हुनुको एउटा कारण यहाँका प्राय: कलेजले 'डोनेसन' शुल्क नलिनु हो। यहाँका कलेजहरूले कर्नाटकभित्रका भारतीय, कर्नाटकबाहिरका भारतीय र विदेशी गरेर तीन प्रकारले विद्यार्थी वर्गीकरण गरी पढाइ शुल्क निर्धारण गरेका छन्। यद्यपि, विदेशीले स्वदेशीले भन्दा बढी शुल्क तिर्नु पर्दैन। विदेशी विद्यार्थीका लागि कलेज होस्टेलहरू सहज उपलब्ध छन्। तर, 'पेइङ् गेस्ट'का रूपमा पनि कतिपय विदेशी विद्यार्थीहरू स्थानीयहरूसँग परिवारमा बसिरहेका छन्।
यहाँका कलेजहरूमा विद्यार्थीको हाजिरी व्यवस्था कडा र शैक्षिक प्रणाली पनि व्यावहारकि हुने हुनाले अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानले बैङ्लोरमा पढ्ने भनेपछि सहजै मान्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् नेपाली विद्यार्थीहरू। आचार्य इन्स्िटच्युट एन्ड बीएम रेडी कलेज अफ फार्मेसीका विद्यार्थी अखिलेश चौधरी, २१, भन्छन्, "कलेजमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिरी हुनैपर्ने नियम छ। नत्र परीक्षा नै दिन पाइँदैन, के गर्नू ?" यहाँको पढाइको आकर्षणको अर्को कारण यहीँ रोजगारीको बढी सम्भावना हुनु पनि हो। जस्तो : यहाँका हरेकजसो राम्रा कलेजमा अन्तिम वर्षको परीक्षा सक्दानसक्दै सम्बन्धित क्षेत्रका रोजगारदाताहरू कलेजमै अन्तर्वार्ताका लागि आइपुग्छन् र धेरैलाई त्यहीँ नियुक्ति पनि दिन्छन् । त्यसैले पनि नेपालीका लागि बैङ्लोर उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा परिचत भइरहेको छ।
This appeared in Print at Nepal Magazine dated 29th May, 2011. Click Here for the e-paper view
written by Admin at 6:53 PM
Labels: Features, Journey to India